Toekarena Anglisy Sarotra ny fandidiana
Ny “’ brexit” na ny hoe « BRITISH EXIT » dia ny fialan’i Royaume Uni ao amin’ny Vondrona Eoropeana (UE) taorian’ny fitsapan-kevi-bahoaka natao tany an-toerana tamin’ny 23 jona 2016 ka nahazahoan’ny mpomba izany ny taha 51.9%.
Ho fanatanterahana ny andininy faha 50 tamin’ny fifanarahana miaraka amin’ny UE, ny Anglisy sy ny firenena 27 mikambana ao dia nanapaka fa roa taona no fanomanana ny fialany. Taorian’ny fialan’ny Praiminisitra David Cameron tamin’izany anefa dia i Theresa May no lany hisolo azy tamin’ny volana jolay 2016. Araka izany dia izy no mitarika ny fifanarahana amin’ny fialan’ny Anglisy ao amin’ny vondrona Eoropeanina. Tsy nahomby hatrany anefa hatreto ny fifanarahana satria dia in-telo nahemotra izany: ny voalohany tamin’ny 29 martsa, ny faharoa ny 12 aprily ary ny farany dia amin’ny 31 oktobra ho avy izao satria nolavin’ny ireo solombavambahoaka tao amin’ny antoko “Conservateur” misy an-dRamatoa Theresa May hatrany ny fifanarahana izay natolony. Nanoloana ireo tsikera sy fanaratsiana azy manoloana io tsy fisiana fifanarahana io dia nametra-pialana i Theresa May. Maro sahady ireo anarana kandida milaza fa hanolo azy toy i Boris Johnson izay ben’ny tanànan’i Londres teo aloha, Jeremy Hunt Minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha. Manoloana izany rehetra izany, ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana Praiminisitra vaovao dia hifantoka tanteraka amin’ny Brexit, tsy ny solombavam-bahoaka ihany anefa no mila resena lahatra amin’izany fa eo ihany koa ny vahoaka izay mbola maro no tsy te hiala ao amin’ny vondrona Eoropeanina ary ny ankabeazan’ny mponina dia ny tanora mankasitraka ny fiombonan’i eoropa (pro-européen). Sarotra araka izany ny asa izay hiandry ny Praiminisitra vaovao eo satria raha miala na mijanona ao amin’ny UE ny Anglisy dia samy hisy akony lehibe eo amin’ny toekareny izany.